Izindatshana zikaLarizza de Vera ku Martech Zone
Imibhalo nge ULarizza de Vera
NgoMgqibelo, Okthoba 31, 2020 NgoMgqibelo, Okthoba 31, 2020 ULarizza de Vera
Eminyakeni embalwa edlule, kube nezinguquko ezinkulu endleleni esisebenzisa ngayo i-intanethi ukumaketha kwedijithali. Siqale ekwakheni iwebhusayithi nje manje sisebenzisa idatha nomsebenzi womsebenzisi. Ngomncintiswano omkhulu esikhaleni sedijithali, ukuba newebhusayithi ngeke kumane kukusike. Abathengisi bedijithali kufanele benyuse umdlalo wabo ukuze bagqame endaweni yanamuhla eshintsha njalo. Ukumaketha emhlabeni wedijithali kuhluke kakhulu kunalokho
Ukumaketha kungumsebenzi oqhubekayo. Noma ngabe uyinkampani yebhizinisi noma ibhizinisi elincane, ukumaketha kuyindlela ebalulekile yokugcina amabhizinisi eqhubeka nokusiza ukuqhubela amabhizinisi empumelelweni. Ngakho-ke kubalulekile ukuvikela nokugcina isithunzi somkhiqizo wakho ukuze wakhe umkhankaso wokumaketha obushelelezi webhizinisi lakho. Kepha ngaphambi kokuza nomkhankaso wamasu wokukhangisa, abathengisi kudingeka balibone ngokugcwele inani kanye ne